News - Isi okwu nke Amazons ngwá ụlọ bụ "afọ ojuju"
Isi okwu nke Amazons arịa ụlọ bụ “afọ ojuju”
Isi okwu nke Amazons arịa ụlọ bụ "afọ ojuju". Ihe omuma ihe omuma anyi bu inye ndi oru ahia ihe omuma. Ọ bụrụ na afọghị ha, anyị ga-aga n'ihu na-enye ọrụ n'efu ruo mgbe afọ ojuju onye ahịa. Omenala bụ isi bụ ikwesị ntụkwasị obi na iguzosi ike n'ezi ihe na nzaghachi ngwa ngwa nye ajụjụ ndị ahịa.
E guzobere Amazons Ngwongwo na 2012, na mbido, ọ kachasị na-arụ ọrụ nke ụlọ ndị America na arịa ụlọ. Ugbu a ọ bụrụla onye na-ebu ihe eji ebu ibu nke nwere ike ibute sofas ndị a tụrụ atụ, arịa osisi siri ike, na arịa ụlọ.
Kpụrụ anyị bụ isi ọdịbendị anyị. Ha na-eje ozi dị ka compass, n'ihi na ha na-akọwa ụzọ ọrụ. Ha na-eweta ịdị n'otu nke ebumnuche na ọkwa niile nke nhazi.
Ihe mgbaru ọsọ Amazons bụ ịghọ ọkachamara na-ebu ngwá ụlọ. The isi uru bụ iwekota kacha mma ngwá ụlọ soplaya anyị ka anyị wee nye ndị ahịa na nke kacha mma mma ahụmahụ ngwa ngwa na mma. Site na ikwekọ na echiche ndị ahịa, imewe zuru oke Ngwa ụlọ mara mma, belata ọnụahịa nke ngwaahịa, iji nweta oke ahịa ahịa ụlọ dịka o kwere mee.
N'oge oria COV-19 na 2020, Amazons Furniture lekwasịrị anya n'ịzụpụta ngwaahịa ọhụrụ dabara adaba maka ahịa ma tinyekwuo ume na mmepe na mmepụta nke arịa ụlọ. Ugbu a, arịa ụlọ e ji mere anụ ụlọ dịka ụlọ nkịta, ụlọ nkịta, akwa anụ ụlọ, anụ ụlọ ndị dị ka cushions ejirila nwayọọ nwayọọ nweta ahịa ọhụrụ.